Qorshaha Dowladdu ay ka leedahay Waxbarashada inta u dhaxayso 2018-2020-ka
By ibrahim Aden shire December 15, 2017
Dowladda Fedaralka ah ayaa diyaarisay qorshaha ay ka leedahay waxbarashada dalka iyo yoolka ay rabto inay gaarto labada sano ee soo socoto. Diyaarinta qorshahaan waxaa maalgaliyay hayadaha UNICEF iyo Global Partnership for Education. Nasiib darro warbixinta iyo xogta ay xambaarsantahayba waxaa lagu qoray af qalaad sidaa darteed dadkeennu wax badan kama oga xaaladda ay ku suganathay waxbarashada dalka iyo meesha loo jihaynayo. Waxaan isku dayi doonaa inaan soo kobo nuxurka qorshaha.
Marki laga hadlayo horumarka Soomaaliya, dalka waxaa loo qaybiyaa sadex: Somaliland, Puntland iyo Koofurta&Baratahama Soomaaliya (KBS). Labada hore waxay leeyihiin qorshe u gooni ah oo ay iyagu dagsadaan. Marka waxaan halkaan kusoo qaadayno waa midda danbe laakiin si kooban inaan u yara tilaamo way dhici kartaa isbarbardhig ahaan.
Inta aanan gaarin yoolka dooladdu tiigsanayo waxaan ku hormari xaaladda waxbarashada aasaasaiga ah ee dalka hadda ka jirto si loo fahmo baahida iyo suura galnimada yoolka dowladda.
Waxbarashada bilowga iyo Barbaarinta (Early Childhood Care and Education)
Qaybtaan wax horumar ah oo la taaban karo lagama samayn. Qorshihii sadexdii sano ee la soo dhaafay loo dajiyay qaybtaa, dhammaantood midna kama hirgalin. Laakiin caruurta da’daan ah waxay dhigtaan malcamado iyo iskoollo gaar loo leeyahay dadkuse aysan wada awoodin dalkana aan kuwada oollin.
In kastoo dowladdu qortay qorshe tilmaamayo waxa ay ka damacsantahay qaybtaan, hadana ma jiro manhaj u diyaarsan, siyaasad lagu hago iyo tababarro iyo waxbarasho loogu talagalay macallimiinti dhigi lahayd. sidaas awgeed magac ahaan mooyee si kale uma jirto waxbarashada da’daan oo aad muhiim u ah.
Waxbarashada aasaasiga ah (primary Education)
Qaybtaan waa midda aan wada naqaan meel walbana xoogga laga saaray. Dhowrki sano ee la soo dhaafay waxaa xoogga la saaray in la hormariyo waxbarshada hoose hase ahaatee yoolalki intoodi badnayd waa la gafay. Isdiiwaan galinta guud ayaa ah mid aad u hoosayso. 22.1% kaliya ayaa ahayd caruurta isu diiwaan galisay dugsiyada hoose, taasi waxay ka dhigantahay 77.9% caruurtu iskool ma dhigtaan.
Waxaa sidoo kale muuqatay dheelitir la’aan u dhaxayso miyi ka warqabeenka iyo magaalooyinka. Tusaale, 12% kaliya ayay noqotay isdiiwaan galinta tuulooyinka halka magaalooyinku ay ahayd 58%. Labka iyo dhaddigu waxaa isu soo dhawaadeen (44% dhadig, 56% lab).
Shaxda hoose waxay tusaysaa saamiga isdiiwaan-galinta guud ka maamul gobaleed ahaan.
Waxaa cad inuu jiro farqi weyn uu dhexeeyo maamullada. Jubaland ayaa ugu fiican oo guud ahaan saamigu yahay 29.7%. Jubaland haddii aad si hoose u fiiriso faqri balaaran ayaa u dhaxeeyo gobollada. Gedo ayaa ugu sarrayso oo 39.9% yahay saamigeedu halka Jubada Hoose ugu hoosayso (20.2%). Arintaan waa mid lama filaan ah waayo Jubada Hoose waxaa ku taal Kismaayo oo caasimad ah dad badanna ku nool yahay. Sidoo kale, waxaa lagu tuhmayay lacagti gobalka oo dhan inaysan iyada soo dhaafin marka inay heerkaas joogto waa amakaak ah.
Gedo heerka ay joogto ayaa iyaduna ah mid fiiro gaar ah leh. Abaaraha aan kala go’a lahayn, colaadaha gaamuray iyo dhaqaalaheeda oo hooseeyo darteed dadku waxay aamineen inay Gedo tahay meel duntay. Hase ahaatee waxaa muuqato in dadkeedu dantiisa qabsaday kana shaqeeyay inuu la noolaado xaaladda haysato. Isu tashigaas ayaa keenay guushan balaaran ee ay ka gaareen waxbarashada.
Koofur-Galbeed ayaa ugu hoosayso maamullada 11.8% kaliya ayaa caruurta iskool ka aaddo. Sawirkaan runtii waa mid argagax leh. Si guud kuufurta iyo Bartamaha soomaaliya Banaadir ayaa ugu sarrayso oo saamigeedu yahay 30.7%.
Puntiland ayaa u muuqato inay dalka ugu fiicantahay. Waxaa fiiro mudan farqiga u dhaxeeyo iyada iyo Somaliland. Dadka intiisa badan waxay u haystaan in Somalind hoggaanka horumarka dalka u hayso laakiin sawirkaan wuxuu tusayaa sidaas si ka duwan.
Ku baaqi ahaanshaha iskoolka ayaa ah mid dhib ka joogo. Inkastoo caruur badan is qoraan fasalka koowaad hadana tiro yar ayaa gaarto fasalka shanaad. Saamiga baaqi ahaanshaha ilaa fasalka shanaad ayaa ah 64%. Taasi waxay ka dhigantahy boqolkii ayday ee koowaad fadhiisato 36 ayaan gaarin fasalka shanaad.
Markale, magaalooyinka iyo miyi ka warqabeenka ayaa farqi weyn u dhaxeeyaa. Halka Banaadir saamiga baaqi ahaanshuhu yahay 96.7% Bakool waa 36.4%. Gabdhaha ayaa aad ooga badan wiilasha xagga iskool ka bixidda.
Guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan oo Somaliland ku jirto 195804 arday ayaa ka diiwaan-gashan dugsiyada sare. 39% ardaydaan ayaa dhadig ah. KBS marki hoos loo sii eego waxaa muuqanayso sawir madow. Tusaale, 32% ayaa ah fasalka Koowaad halka 14% kaliya ay yihiin fasalka Afraad. Taasi waxay ka dhigantahay in tiro badan usoo gudubto fasalka koowaad ee dugsiga sare laakiin aysan dhamaysane dhexda ooga tagaan.
Tuulooyinka caruurta ku nool 1.3% kaliya ayaa dugsi sare ka dhigto. Guud ahaan dalka 30% caruurta ayaa ka diiwaan gashan iskoollo dowaladdu maamusho. Laakiin KBS 8% kaliya ayaa dhigto dugsiyada sare ee ay dowladdu maamusho. Arintaan waxay tusaysaa in caqabada ay ka mid tahay iskoolada lacagta ah ee aysan dadku wada awoodin.
Waxbarashada dadka waaweyn (Alternative Education)
Waxaa jiro iskoollo badan oo dalka ka furan looguna talagalay ardayda dhaaftay da’da dugsiyada hoose. Iskoolladaan intooda badan waxaa gacanta ku hayo NGO-yo. 14801 arday ayaa iskoolladaan ka diiwaan gashan. KBS waxaa ka furan 11 xarumood oo dadka waaweyn wax lagu baro 1361 ardayna ay dhigato.
Hasa ahaatee xogtaan waxaa laga soo xigtay dowladda dhexe waxaase jirto xog kale oo ay soo gudbiyeen NGO-yada taasoo tusayso in 44 xarumood oo ay dhigtaan 5000 oo arday ay ka furan yihiin KBS. Midka saxda lama yaqaan laakiin waxaa runta u dhow midda dowladda.
Waxbarashada tababarrada shaqooyinka (Technical , Vocational Education &Training)
Qaybtaan oo ah midda ugu muhiimsan baahida ugu weyna maanta loo qabo ayaa ah midd ay aad u hoosayso tirada ka diiwaan gashan marki loo eego tirada ay ahayd inay dhigato. Guud ahaan dalka waxaa ka diiwaan gashan 145309 arday. 90% dhallinta da’dooda u dhaxayso 14-24 kama diiwaan gashano waxbarasho sare sidaas darteed waxay ahayd inay tiro aad u badan aadaan tabar shaqo.
Qorshihii hore ee loo dajiyay 2013-2017 ayaan waxba laga qaban qaybtaan. Sababta ugu wacanna waxay ahayd dhaqaalo iyo tabar darro xagga dowladda ah. Sidoo kale deeq-bixiyayaashu aad isugma howlin inay wax ka qabtaan qaybtaan.
Guud ahaan dalka waxaa xagga waxbarashada ka haysto dhib weyn. Maamulladu xil iskma saarin inay dhaqaale ku bixiyaan waxbarashada aasaasiga ah. Hase ahaatee waxaa muuqto ifafaale qurxoon oo ay hurmuud ka tahay bulshadu. Waxaa sidoo kale jiro dadaal xagga dowlada ah kaas oo ay ku fududaynayso manhaj midaysan iyo yool cad.
Inshallah qaybta xigto waxaan u eegi doono qorshaha dowladda iyo yooleeda.